काठमाडौँ । आफुले विवाह गरेको प्रस्ताव नमानेको भन्दै कञ्चनपुरमा एक जना युवकले युवतीको अनुहारमा तातो घ्यू खन्याएर आँखा समेत फोडीदिएर फरार भएका छन्।
युवतीको परिवारले विवाहको प्रस्ताव अस्विकार गरेको भन्दै ति युवकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका- ५ की २३ वर्षीया सुनिता चन्दमाथि कुटपिट गर्दै अनुहारमा पोल्ने तातो घ्यू खन्याएर आँखामा हातका औंलाले फुट्नेगरी घोचिदिएर भागेका छन्। सुनितामाथी निर्घात कुटपिट गर्ने व्यक्ति सोही नगरपालिका वडा नम्बर १० गड्डाचौकीमा बस्ने २७ वर्षीय राकेश चन्द नाम गरेका युवक हुन्। उनी अहिले फरार रहेका छन्।
प्रहरीका अनुसार, ‘बुधबार बिहान करिब १० बजेतिर आमा–छोरी मात्रै घरमा भएको मौका छोपी राकेशले सुनितामाथी कुटपिट गरेका थिए ।’ उक्त समयमा पिडित सुनिताकी आमाले घरमा घ्यू तताइरहेकी थिइन्। तब उसले उक्त घ्यूले नै सुनिताको अनुहारमा हानेको थियो। त्यसपछि उसले आँखामा हातका औँलै औंलाले घोचेर फरार भएका थिए। जसका कारण उनको आँखामा गम्भीर चोट लागेको कञ्चनपुरका डिएसपी ज्ञानबहादुरसेटीले जनाएका छन्।
घटनापछि पिडित सुनिताको उपचारार्थ महेन्द्रनगर आँखा अस्पतालमा लगिए पनि उनको आँखामा गम्भीर चोट लागेको र निकै रगत बगेका कारण थप उपचारका लागी कैलालीको गेटा अस्पताल लगिएको छ ।
यसकारण घट्यो घटना
खासमा घटनाका पिडक राकेश चन्दले पहिले सुनिताको परिवारसँग विवाहको प्रस्ताव राखेका रहेछन्। राकेश आफन्त पर्ने भन्दै उक्त विवाहको प्रस्तावलाई अस्विकार गरिदिएकी रहेछिन्। राकेशले गत मङ्सिरमै विवाह गरिसेको र सुनितालाई दास्रो श्रीमती बनाउन दवाव दिँदै आएको प्रहरीले बताएको छ।
सुनिता र घर परिवारले बिहे गरिदिन अस्विकार गरेको झोकमा आवेगमा पशुवत रुपमा सुनितामाथी आक्रमण गरेको बुझिएको छ। सुनितामाथि निर्घात कुटपिट गर्ने राकेश चन्द घटनापछि फरार छन्। अहिले उनको खोजी भईरहेको कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरीले जानेको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४१८:२९
आज दिउँसो ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा २ को मृत्यु: ३ घाइते
राजपालाई ओलीको कटाक्ष- बिराली रिसायो भने मान्छेलाई चिथोर्न मिल्दैन…, खाँबो चिथोर्छ !
एयर सोको तयारीमा रहेका वायुसेनाका दुई जहाज दुर्घटना [भिडियो ]
जडिबुटीमा इन्सपेक्टर एलिजाको सक्रियता ! नक्कली गहना, १२ नागरिकता आदि सहित एक पक्राउ !